संघीय गठवन्धनको आमहड्ताल स्थगित. – Sabaikoaawaj.com
संघीय गठवन्धनको आमहड्ताल स्थगित.
बुधबार, जेष्ठ १७, २०७४ 9:08:33 PM	मा प्रकाशित
काठमाडौं १७ जेठ/ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल सम्मिलित संघीय गठवन्धनले आमहड्ताल फिर्ता लिँदै दोस्रो चरणको चुनावमा जाने संकेत दिएको छ । तर, मुद्दा फिर्ता, स्थानीय तहको संख्या बृद्धि लगायतको माग पूरा हुनुपर्ने उसले शर्त छ । सरकारले स्थानीय तहको चुनाव असार १४ लाई सारेकै दिन गठवन्धनले विहीबार र शुक्रबारका लागि घोषित बन्द फिर्ता लिएको हो ।
गठवन्धनले उम्मेदवारी दर्तालाई लक्षित गर्दै भोलि र पर्सि तराई मधेस-थरुहट र लिम्बुवानमा आमहड्ताल गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, चुनावसँगै उम्मेदवारी दर्ता पनि सरेको छ । चुनावमा भाग लिन राजपालाई दबाव बढ्दो छ । बुधबार विहान बसेको राजपा नेपालको बैठकले आम हड्तालसहितका आन्दोलन स्थगित गर्ने निर्णय गर्‍यो, जसलाई संघीय गठवन्धनले अनुमोदन गरेको छ । र, यसलाई निर्वाचनमा आउने सम्भावनाका रुपमा हेरिएको छ ।
बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिए पनि गठबन्धनको बैठकले दबामूलक कार्यक्रम भने अघि सारेको छ । उसले २४ गते हरेक स्थानीय तहको एक ठाउँमा विरोध सभा गर्ने र २५ गते मधेस, थरुहट र लिम्बुवानमा २ घन्टा चक्काजाम गर्ने निर्णय गरेको छ । राजपाका एक नेता भन्छन्, ‘यो आन्दोलनका कार्यक्रम भन्दा पनि हाम्रा माग पूरा गर्न सरकारलाई समय दिइएको हो । हाम्रा न्यूनमत माग पूरा गरेर वातावरण बनायो भने हामी चुनावमा सहभागी हुन्छौं ।’
संघीय गठवन्धनले यो अवधिभित्र संविधान संशोधन, मुद्दा फिर्ता र जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या बृद्धि गर्न माग गरेको छ । अन्यथा आन्दोलनका कडा कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएको छ ।
प्रकाशित मितिः बुधबार, जेष्ठ १७, २०७४ 9:08:33 PM